Top 7 ✩ Who made the biggest contribution to the crypto industry?
Januwari 9, 2018 admin
Ubani owenza umnikelo enkulu embonini mfihlo? Top 7
Satoshi Nakamoto – Bitcoin, block Chain
the founder of Bitcoin and creator of unique Bitcoin client, uphokophele uhlu wabantu abanethonya kakhulu abenze iminikelo kulenkhulu uye umkhakha mfihlo. Ngaphansi kokuhlaziywa kwakamuva kwe-Quartz, Namuhla Satoshi Nakamoto kungase kudingeke kusukela 980,000 ukuze 1 abayizigidi ezingu-bitcoins. Ngo-December, umdali bitcoin sika engaziwa Kwakuyodingeka $19.4 billion noma iye yaba 44 umuntu acebe kakhulu emhlabeni. Uma bitcoin iba lwemali global, Satoshi Nakamoto Mhlawumbe ngabe umuntu acebe kakhulu emhlabeni. Kodwa ubani ofihla ngaphansi mbumbulu ka Satoshi Nakamoto namanje akwaziwa.
Esikwaziyo ukuthi White Paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” yanyatheliswa ngaphansi mbumbulu ka Satoshi Nakamoto ngo-October 31, 2008. Lokhu White Paper echazwe uhlelo endlalekile ngokugcwele yemali electronic, elalingelona aludingi wesithathu. Iphrofayela ku-website ye-P2P Foundation ithi Satoshi Nakamoto oyisakhamuzi eneminyaka engu-42 ubudala yase-Japan, futhi inikeza isixhumanisi bitcoin.org. Ekupheleni 2010, Satoshi yamemezela ukuthi uyahamba ukubhekana “izinto ezibaluleke kakhudlwana.” Kusukela ngaleso sikhathi kwakungekho umsebenzi egameni Satoshi Nakamoto. Lena lonke ulwazi engase ibhekwe okuthembekile; okunye kokuqagela ukuqagela.
Nick Szabo – uHlelo Lobhalomfihlo, Cryptocurrencies, Izinkontileka smart
is a famous cryptography specialist and a researcher in theoretical computer science. Nguye yethulwa nomqondo “smart inkontileka ” e 1996, okuvumela ukwabelana amafa ngaphandle asebenzise besithathu. Ngo 1998, Szabo yakhelwe ezosetshenziswa lwemali endlalekile digital walibiza ngokuthi “kancane igolide.” Akumangazi ukuthi abahlanganyeli abaningi mfihlo emakethe cabanga kuye Satoshi Nakamoto.
Szabo limenyezelwe ukuphikisana kwakhe SegWit2x, okwakukhona owawuzoba inethiwekhi Bitcoin ekwindla zokugcina. Wachaza ekuphambukeni onzima inethiwekhi Bitcoin, Bitcoin Cash, njengoba “eyodwa Sock puppetry.”
Kugcine Novemba, Szabo futhi umcwaningi Elaine Ou wasungula indlela yokusebenza ukuthumela Bitcoin ukuthengiselana phezu amasignali omsakazo. Le ndlela yethulwa ngesikhathi Ukulinganisa Bitcoin Conference e-San Francisco njengendlela ukuvikela inethiwekhi ekuhlaselweni bezikhali izibhulamlilo, inethiwekhi kuphuma, noma ezinye izindlela ukulawula amanethiwekhi endlalekile engasetshenziswa lwamazwe noma nezinkampani zokuxhumana.
Roger Buka – Bitcoin.com
ikakhulu eyaziwa ngokuthi omunye abayizinjinga lokuqala bitcoin, a.k.a. Bitcoin uJesu, okuyinto akumangalisi kusukela Ver waqala ukutshala imali bitcoin kudala njengoba e 2011. Kuyaphawuleka ukuthi Ver uyindoda esingaphezulu kakhulu kwesivamile ngisho ngezindinganiso zezwe mfihlo. Ngo 1999, ngemva konyaka wonke cwaningo, wawisa aphume De Anza College esivuna beqhuba ibhizinisi siqu. Ngo 2005, wagwetshwa izinyanga eyishumi ejele ngenxa yokukhuluma ukuthengisa okhilikhethi (emthethweni e-United States) ku-eBay. Ngo 2006, Roger kuhanjiswe ku Japan amthukile yisakhamuzi American. Ngo 2012, waba ngomunye wabasunguli be inhlangano engenzi-nzuzo, Bitcoin Foundation, ukuthi ihlose "elifanele, ukuvikela, futhi ukukhuthaza ukusetshenziswa Bitcoin imali wokubhala ngezimpawu ukuze kuzuze abasebenzisi emhlabeni wonke. "Namuhla Ver ophethe cryptocurrency wallets isevisi, Bitcoin.com
Kulo nyaka esisuka kuwona, Ngaphakathi the gama of Roger Ver ebonakala ngokuphindiwe kwabezindaba ngenxa ukwethulwa cryptocurrency entsha, Bitcoin Cash, yena isekela ngakho manje okuningi. Ngokusho umbono wakhe, Bitcoin Cash kuyinto “bitcoin kweqiniso” esekela amagugu Satoshi Nakamoto.
Charlie Lee – Litecoin
kuyinto ikhandidethi yesibili ezidume kakhulu isihloko “kweqiniso” Satoshi Nakamoto. Ngo 2011, yaba omunye altcoins lokuqala, Litecoin, eyabonakala ngenxa ekuphambukeni e inethiwekhi Bitcoin. Abantu ukufunisela ukuthi Litecoin kungenzeka “isiliva legolide bitcoin sika.” Ngo 2013, Lee wasiphakamisa isikhundla sokuba bezokusebenza Coinbase, platform enkulu cryptocurrency. kodwa e 2017, wanquma ukushiya inkampani ukugxila Litecoin ukukhuthazwa.
Onyakeni, izinga cryptocurrency bakhula by izikhathi ezingaphezu kweziyisishiyagalombili nokuba eziyishumi, futhi njengamanje imi $255. Ngo-December, Charlie Lee umemezele ukuthi libathengisile zonke Litecoins yakhe ngakho bekungekho umuntu obegade angasehlukanisa bammangalele ka ezithinta ekushintshashintsheni intengo. Wagcizelela ukuthi wayengeke akwazi ukushiya iphrojekthi futhi aqhubeke ukunikela sonke isikhathi sakhe kulo msebenzi.
Tony Weiss – BraveNewCoin
abadayisi bitcoin futhi zimali kanye Ex-umsekeli kaMongameli walelibandla at JPMorgan Chase-Kuyaziwa emphakathini mfihlo. Weiss iye njengelinye lamazwe abavangeli lokuqala blockchain ukugqugquzela ubuchwepheshe uquqaba njengoba 2013. Anakho ibhulogi yimpumelelo, podcast, Youtube Channel, futhi ezingaphezu kuka 80,000 abalandeli ku-Twitter. CoinTelegraph ngokuvamile ishicilela amazwana izinto zakhe. Ngaphezu kwalokho, e 2014, Weiss baba iNhloko Ucwaningo at BraveNewCoin.
Ngokwe-Weiss’ ucwaningo esashicilelwa ngo-September odlule futhi kusekelwe ukukhula lomchazi abasebenzisi bitcoin, ekupheleni 2018, Intengo bitcoin unakho adlula $100,000 uphawu. Ngaphambili, Weiss wawuthi, ekupheleni 2017, bitcoin ngabe ukuwela $15,000 uphawu, okuyinto asizange ukugcina ngo-December 17. Weiss obala ugxeka izindlela zanamuhla zokukhulekela ukhulisa izimali ngokusebenzisa ICO, njengoba 90% ka ICO maphrojekthi “hype nje.”
Vitalik Buterin – Ethereum
iyona co-umsunguli ingenye amaphrojekthi ngobukhulu cryptocurrency, Ethereum, futhi cryptocurrency ayo, okungukuthi ether. Ngo 2013, Buterin eshicilelwe cryptocurrency White Paper eyakhelwe blockchain, lapho abasebenzisi bangasebenzisa izivumelwano smart ukuthi abenzele amathuba amaningi ayingqayizivele.
Kusukela kuqale lo nyaka, izinga le-ether kukhuphuke 57 izikhathi, futhi Buterin bajoyine Isilinganiso American Forbes “30 ngaphansi 30.” Bloomberg kuhlanganisiwe Buterin ohlwini we 50 abantu abaningi izilomo 2017, kanye Forbes Russian kuhlanganisiwe kuye ku uhlu 100 AmaRashiya kakhulu enethonya kwekhulu.
Ngonyaka odlule, Buterin yaba enye yezindawo osomabhizinisi abambalwa owahlangabeza noMongameli Putin ngesikhathi St. Petersburg Economic Forum. Imininingwane ingxoxo kungukuthi kwembulwe, kodwa ngemva kwalokhu umhlangano, iziphathimandla zaseRussia wenza U-turn ku blockchain ubuchwepheshe kanye cryptocurrencies, ukushaya blockchain i ubuchwepheshe ezithakazelisayo azinake. Ngaphezu kwalokho, kwaziwa ukuthi Ethereum wayehamba ukuqalisa project ngokuhlanganyela ne Vnesheconombank (WEBSITE); Sberbank wajoyina i project international Enterprise Ethereum Alliance (EEE), okuyinto kakade kuhilela okungaphezu 200 izinkampani, futhi waba ngowokuqala Russian Bank at EEA.
Gavin Izinkuni – silinganiso Technologies, Amagqabhagqabha
iyona wabasunguli ngaleso sikhathi nalabo bangaphambili CTO at Ethereum, ngubani siguqulwe kokuqala Ethereum White Paper eyabhalwa Buterin ku uhlelo empeleni egijima. Manje Izinkuni uphokophele inkampani silinganiso Technologies, okuyinto eba software blockchain amanethiwekhi. Futhi wabasunguli we Polkadot sokuqalisa, okuyinto eba protocol oluyokwenza ekuthuthukiseni inethiwekhi scalability okwesikhathi kwedivayisi enkulu blockchains ezimele kanye nekahulumeni.
I 2017 ngonyaka kwaba nzima ngoba Izinkuni. Ekuqaleni konyaka, inkampani ngempumelelo wakhulula silinganiso 1.5, i olusha Ethereum inethiwekhi amaklayenti. Kodwa ngemva isiqalo esihle, phakathi konyaka, Silinganiso Technologies babhekana nobunzima ezinzima.
Julayi Kugcine, i-wallets zaqoshwa. I kubaduni wathola bug kwinkontileka nge multisignature, okuyinto wabavumela ukweba 153,000 ethers (mayelana $32 abayizigidi ezingu ngesikhathi). Silinganiso ezikhishwe inguqulo ebuyekeziwe ye-smart inkontileka ukuxazulula le nkinga. Noma kunjalo, elinye bug ezibucayi, okuyinto uhlala umtapo ephethe logic wallets, u sitholakale ngoNovemba. Ngenxa iphutha а Unicode sika, emhlabeni $152 million iqandiswe abasebenzisi silinganiso’ akhawunti.
Ngokusho Izinkuni, bonke abasebenzisi’ asethi edijithali egcinwe yesikhulumi ziphephile ngokuphelele, kodwa t akakabi kungenzeka uyaziveza kunethiwekhi. Kuyaphawuleka ukuthi phakathi amafa eqandisiwe kwaba $98 abayizigidi ezingu ezaphakanyiswa Polkadot uqalisa nge ICO.
Izinguqulo ethandwa kakhulu ngubani empeleni ngemuva igama Satoshi Nakamoto yilezi ezilandelayo:
Nick Szabo - usosayensi emkhakheni computer science, indlela yokubhala efihla incazelo, futhi umthetho, kanye umcwaningi izinkontileka smart futhi cryptocurrency.
Charlie Lee - ungumdali Litecoin.
UNeal King, vladimir Oksman, noCharles Bry - abalobi isicelo se-patent, ngokuthi “Ibuyekeza nasekusakazeni ukubethela okhiye.”
Michael Klare - iziqu indlela yokubhala efihla incazelo e College of Dublin.
Hal Finney - onguchwepheshe indlela yokubhala efihla incazelo.
Dorian Nakamoto - isakhamuzi-United States (California) Lokudabuka Japanese.
Craig Wright - i usomabhizinisi wase-Australia.
Eloni Musk - Billionaire abadumile, inhloko Tesla and Space X, kanye ilungu leBhodi ngesikhathi SolarCity
Konke, ngaphandle Craig Wright, ukuphika bengabakaJehova le cryptocurrency lokuqala. mhlawumbe, kuba ucezu kakhulu izindaba emakethe mfihlo ngoba Nakamoto kunesithembiso 5% kuzo zonke bitcoins. Ngakho, Nakamoto, uma uthanda, Kungenzeka kakhulu ezithinta izinga bitcoin futhi mfihlo emakethe.
Blockchain Izindaba 17 Januwari 2018
Blockchain ETFs laun ...
Blockchain Izindaba 24 Januwari 2018
Ukwenza mhlophe Investment ...
California izishaya kukhipha umthetho omusha ku Bitcoin futhi Blockchain
umthetho wase-California State ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 9 Januwari 2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 10 Januwari 2018
Blockchain Izindaba 13.10.2018
Blockchain Izindaba 12.10.2018
Blockchain Izindaba 11.10.2018
Blockchain Izindaba 10.10.2018
Blockchain Izindaba 09.10.2018
Blockchain Izindaba 08.10.2018
Blockchain Izindaba 06.10.2018
Blockchain Izindaba 05.10.2018
Blockchain Izindaba 04.10.2018
Blockchain Izindaba 25.09.2018
Blockchain Izindaba 24.09.2018
Blockchain Izindaba 20.09.2018
Blockchain Izindaba 19.09.2018